IiNkonzo zobuGcisa boBuchule boBuchule boMbane, iCar Wash Product Wholesale ... OPS
Ikhaya / malunga
Ngokusekwe kwi2007, sineminyaka emininzi yembali kwishishini lokhathalelo lweemoto. I-Zhejiang OPS yoKhuselo lweNdalo esiNgqongileyo i-Co, Ltd ngumenzi omkhulu owenza umatshini kuzo zonke iindidi zoNgcakazo oluzenzekelayo, ezifana nomgubo wemoto, isicoci samavili emoto, ifomula yokuhlamba imoto ngaphakathi, iimveliso zokucoca zangaphakathi, Iitafile zokuhambisa umoya, lonke ixesha lomoya onomoya washer fluid, njl njl. Sikhona eZhejiang, kunye nokufikeleleka okulula kwezothutho.
Yonke imveliso enelungelo lobunikazi kwaye ihambelana nemigangatho yemigangatho yamazwe ngamazwe kwaye iyaxabiswa kakhulu kwiimalike zasekhaya nakwamanye amazwe. Sibheke phambili ukuseka ubudlelwane obuhle kunye nexesha elide kunye nabo bonke abaxhasi emhlabeni jikelele kwikamva elizayo.
Udibanisa uphuhliso nophuhliso lwendlu
Izixhobo eziphezulu zobugcisa, ziqesha abasebenzi abanezakhono zobugcisa kunye nabaphathi. Siphakamise iteknoloji yokuvelisa kunye nezixhobo zokusebenza.
Ulawulo oluphezulu lomgangatho
Izakhiwo zethu ezixhotyiswe kakuhle kunye nokulawula okusemgangathweni kuzo zonke izigaba zemveliso kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwabaxhasi.
Ukuseka ukubambisana kwexesha elide kunye nabanye abathengi
Njengomphumo wemveliso yethu esemgangathweni kunye neenkonzo ezithengiweyo zabathengi, siye safumana inethiwekhi yokuthengiswa kwehlabathi e-Vietnam, eSingapore, eMalaysia, eKazakhstan, eU.SA, njl.
Umgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo
Siqinisekisa yonke imveliso ngexabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho wokungenisa ngokuthe ngqo kumveliso wethu, qinisekisa iimpahla eziqinisekisiweyo. Enkosi ngenkxaso yenu!
Ukuhanjiswa okukhawulezayo kunye nokwanelisayo emva kokuthengiswa kweenkonzo
Inkampani yethu ibhekisela kumaxabiso anengqiqo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nentsebenzo enhle emva kokuthengisa "njengenjongo yethu. Sithemba ukusebenzisana nabathengi abaninzi ukuphuhlisana kunye nezibonelelo.
I-Plant yethu kunye ne-Ofisi
I-OPS yakha iqela labathengisi abaziingcali ngenjongo "yokuxhamla abathengi kuqala",
kugxininisa ekuxazululeni iingxaki ezahlukahlukeneyo zokuthengisa, ukuthengisa kunye neentengiso emva kokuthengiswa.
Iimveliso zethu zikho kwindawo ehamba phambili kwiimveliso ezifanayo zasekhaya,
kwaye ziyakwamkelwa kakuhle kwiimarike zamazwe ngamazwe. I-OPS ihambelana nomoya "ojongene nabantu, oqeqeshiweyo nabangenangqondo", onobungcali, othembekileyo, ophakamileyo, enkonzo efanelekileyo.
Ulawulo oluPhezulu lweMigangatho
Iinkonzo ezenziwe ngokwezifiso
Unomdla kwimveliso yethu ye-eco?
Siphonononge umgca namhlanje ngenqaku elikhululekile!